Fivoriana teto Mahazoarivo | | www.primature.gov.mg
Fivoriana teto Mahazoarivo
4 décembre 2017 17 janvier 2018
Mahazoarivo, 04 desambra 2017- Teo anatrehan’ny fidangan’ny vidim-bary izay mitranga amin’izao fotoana izao dia nisy fivoriana notarihin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier teto Mahazoarivo, izay nandinihana ireo vahaolana entina hampidinana izany.
Nanambara ny Sekretera Jeneralin’ny Varotra sy ny Fanjifana Rafidy Josielle fa “miara-miasa amin’ny Ministera isan-tsokajiny ny Minisiteran’ny Varotra sy ny Fanjifana amin’ny ezaka atao amin’ny fampidinana ny vidim-bary. Misy araka izany ny fiaraha-miasa amin’ireo mpandraharaha mpanafatra vary sy ireo mpamongady ary ireo mpaninjara izay tsy maintsy hamafisina amin’ny fanaraha-maso”.
Misy ny fanaraha-maso ny vidim-bary miainga any amin’ny mpanafatra vary mankany amin’ny mpaninjara entana madinika. Hisy hetsika manokana hatao manomboka rahampitso amin’ny fanaraha-maso ny vidim-bary manerana an’i Madagasikara. Hojerena ny lalana izay alehan’ny vary avy any amin’ny mpanafatra sy amin’ireo mpamongady.
Efa nisy ny fiaraha-miasa tamin’ireo mpandraharaha amin’io sehatra io tany Toamasina mba hahatonga ny vidim-bary ho 72.000 ariary ny gony. Araka izany dia nisy ny fanaovan-tsonia niarahana tamin’ny mpanafatra vary tamin’ny faran’ny herinandro mba hitazonan’izy ireo io vidim-bary io.
Tonga nanatrika izany fivoriana izany ny Minisitry ny Indostria, ny Minisitry ny Varotra sy ny Fanjifana, ny Talen’ny Kabinetran’ny Primatiora, ary ireo teknisianina ao amin’ny Ministeran’ny Varotra sy ny Fanjifana.
← Visite de courtoisie de l’Ambassadeur de la Grande Bretagne
Fidinana ifotony teny amin’ny tsenan’Anosibe →
Fidinana ifotony tany Toamasina
Opération Mazava 2016 : Sécurisation rurale durable, priorité du Gouvernement
Saison de pluie 2015 – 2016 : Réunion du Conseil National de la Gestion des Risques et Catastrophes